Guddoomiyihii degmada Buur-hakaba oo is rasaaseyn ku dhintay – Radio Muqdisho
Guddoomiyihii degmada Buur-hakaba oo is rasaaseyn ku dhintay
Allaha u naxariistee Guddoomiyihii degmada Buur-hakaba ee gobolka Baay Maxamed Cali Maxamed Maamow ayaa maanta ku geeriyoodey iska hor imaad agagaarka garoonka Bilad-doogle ku dhexmartay ciidamo ka tirsan xoogga dalka iyo maleeshiyaadka argigixsada ah ee Al-Shabaab.
Wariyaha Warbaahinta Qaranka Sakariye Xuseen Axmed Qoryooleey ayaa sheegay in kolonyo gaadiid ah oo dhawaan degamada Buur-hakaba deeq raashin ah gaarsiiyay oo ku soo jeeday dhanka caasimadda in jidka loo galay, isla markaana Guddoomiyihii degmada Buur-hakaba uu ku geeriyooday is rasaaseynta.
“Waxaan la soconay gaadiid kolonyo ah oo dhawaan raashin gaarsiisay degmada Buur-hakaba, aniga iyo wafdi ka tirsan Wasaaradda Arrimaah gudaha, guuddoomiyaha ayaan hal gaari la saarneyn, maleeshiyaad ka tirsan Shabaab ayaa jidka noo gashay, rasaastii la isdhaafsanayay ayuuna ku dhintay guddoomiyaha” ayuu yiri Sakariye.
Sakariye Xuseen Qoryooleey ayaa intaa ku daray in labo askari oo ka tirsan ciidanka ay dhaawacyo ka soo gaareen weerarka, isagoo intaa ku daray qasaare isugu jirta dhaawac iyo dhimasho la gaarsiiyay kooxihii Shabaab ee weerarka gaadmada ah soo qaaday.
Ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM oo gaaray goobtii uu weerarka ka dhacay ayaa halkaas ka bilaabay howlgallo amni xaqiijin ah.
R.W Cabdiweli oo aqbalay go’aanka Golaha Baarlamaanka
Shil ay dad ku dhaawacmeen oo ka dhacay duleedka Beledweyne